Kuphele inkunzi kwadaleka imisebenzi ehlathini laseFrance | News24
Kuphele inkunzi kwadaleka imisebenzi ehlathini laseFrance
ISITHOMBE: NOMPENDULO NGUBANE Ihlathi lapho sekwakhiwa khona amafulethi eFrance ngasemgwaqweni uRichmond kanti azophela ngonyaka ka-2017.
KUSHAYEKE izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa kuqedwa ihlathi ebeseliphenduke isizinda sobugebengu, kwadaleka imisebenzi njengoba kwakhiwa amafulethi kamasipala nje endaweni yaseFrance.
Abantu abebeyizisulu zalobu bugebengu yilabo abebesebenza eMkhondeni njengoba bebanjwa inkuzi kuleli hlathi beya noma bephuma emsebenzini. Kodwa manje sekuqashwe abantu abangu-40 abenza imisebenzi ehlukahlukene kwakhiwa amafulethi agudle emgwaqo uRegie Radebe (Richmond).
Ikhansela likaward 13 okukhona kuyo indawo yaseFrance, uMnu Bongani Dlomo, lithe ukwakhiwa kwala mafulethi kuvulele amathuba omsebenzi abantu baseFrance ngokwezindawo zabo ngokuhlukana kwazo. UDlomo uthe lolu hlelo luqale ngonyka odlule kanti kubhekeke ukuthi luphele ngonyaka ozayo lapho kuyobe sekuqediwe kanti nabantu abafanele nabo bayobe sebeqala ukuhlala kuzo lezi zindlu eziwuhlelo loMsunduzi Housing Association. Uthe ukuvuleka kwale ndawo ikhanye futhi kwakhiwe kuyona kusize kakhulu ekuqedeni ubugebengu obesebudlangile, ikakhulukazi kubantu ebasuke beya noma bebuya emsebenzini eMkhondeni.
“Kuyinto ejabulisayo kakhulu ngoba sishaye izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Lokhu kuchaza ukuthi ubugebengu obebudlangile buphelile ngoba le ndawo isiyakhanya futhi kwaphinde kwavula namathuba omsebenzi kubantu bendawo. Kunabantu abalinganiselwa kuma-40 abaqashiwe kulolu hlelo. La bantu bahlukene ngokwemisibenzi abayenzayo.
“Kukhona abakwazi ukwenza izitini, abakhayo nabenza okunye okuhlukile emsebenzini wokwakha.
“Kuyajabulisa ukuthi kuvule amathuba ukuze abantu bahlomule futhi basebenze ukusiza imindeni yabo. Siyiwadi silandele imigomo efanele ekuqasheni ngoba siqashe abantu ngokwemisebenzi yabo futhi sathatha ezindaweni ezahlukene khona ewadini,” kusho uDlomo.
Ukubeke kwacaca ukuthi amafulethi ayafana namanye amafulethi ohlelo loMsunduzi Housing Assocition kanti nawo kuzolandelwa imigudu efanele lapho sekufanele ukuthi kube nabantu abazohlala khona.
“Abantu bazobhalisa bese-ke kubhekwa ukuthi ngabe kufanele yini bazohlala kuwona. Azobe amukela abantu abafanele ukuthi bazohlala kuwona kulandelwa imigudu efanele.
“Okubaluleke kakhulu ukuphela kokugetshengwa kwabantu kuyo leya ndawo ngoba besikhathazekile kakhulu ngayo,” kuqhuba uDlomo.
Okhulumela uMsunduzi Housing Association uNkk Ivor Caldecott uthe kusukela lolu hlelo lokwakhiwa kwalamafulethi luqalile luthole ukwesekwa okukhulu.
“Uhlelo luqale ngoLwezi ngonyaka odlule kanti kulindeleke ukuthi luphele ngonyaka ozayo